Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Wednesday, January 27, 2010 Wednesday, January 27, 2010 Labels: ရသစာစုများ
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်က အိမ်ထောင်သက် ၁၁နှစ်အကြာမှ သားလေးတစ်ယောက် မွေးဖွားတဲ့ အိမ်ထောင် တစ်ခု ရှိပါတယ်.. အိမ်ထောင်ရှင် လင်မယားဟာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အလွန်ဘဲ ချစ်ခင် စုံမက်ကြသလို တစ်ဦးတည်းသော သားလေးကိုလဲ ဖူးဖူးမှုတ် ချစ်ခင်ကြပါတယ်.. သားလေးဟာ သူတို့၂ယောက်အတွက် အသက်တမျှ မြတ်နိုးတွယ်တာ စရာလဲ ဖြစ်ပါတယ်..
သူတို့သားလေး ၂နှစ်အရွယ် ရောက်လာတဲ့ တစ်နေ့ မနက်ခင်းတစ်ခုမှာ လင်ယောက်ျားက အလုပ်သွားဖို့ ပြင်နေပါတယ်….. အဲလို ပြင်နေ ရင်းနဲ့ အခန်းထဲက ထွက်ခါနီးမှာ ဘီဒိုပေါ်က ပြုတ်ကျနေတဲ့ ဆေးပုလင်း တစ်လုံးကို ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ အဖုံး ဖွင့်ရက်သားလေး ဖြစ်နေတာ တွေ့လိုက်ပါတယ်.. သူက အလုပ် နောက်ကျနေပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် အလျှင်စလို သုတ်သီးသုတ်ပြာ ဖြစ်နေတာကြောင့် အိမ်ရှင်မ ဖြစ်သူကို “မိန်းမရေ… အခန်းထဲမှာ ဆေးပုလင်းတစ်လုံး အောက်ကျပြီး အဖုံးပွင့်နေတယ်… ပြန်ကောက်ပြီး ဗီဒိုပေါ် တင်ထားလိုက်ဦးနော်..” လို့ပြောပြီး အလုပ်ကို ထွက်သွားပါတယ်..
အိမ်ရှင်မ ဖြစ်သူမှာလည်း မီးဖိုထဲမှာ ထမင်းဟင်း ချက်ပြုတ်နေရင်း ဆေးပုလင်းကိစ္စကို လုံးဝ မေ့လျှော့ သွားပါတယ်… သူမရဲ့ သားလေး ၂နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်ဟာ လျှောက်ဆော့နေရင်း ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ကျနေတဲ့ အဖုံးပွင့် ဆေးပုလင်းကို မြင်တော့ ကောက်ယူပြီး ဆော့ကစားနေပါတယ်.. နောက်တော့ ပုလင်းထဲက ထွက်ကျလာတဲ့ အရောင်စုံ ဆေးလုံးလေးတွေ မြင်တဲ့အခါ ကလေးငယ်ဟာ အားလုံးကို ကုန်အောင် ကောက်စား နေပါတော့တယ်.. အမှန်တော့ ထိုဆေးဟာ လူကြီးများသော်မှ များများသောက်ပါက အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော ဆေးမျိုးပါ.. ခုလိုငယ်ရွယ်တဲ့ ကလေး တစ်ယောက် အတွက် ဆေး တစ်ပုလင်းလုံး ဆိုတဲ့ အတိုင်းအတာဟာ အဆိပ် အတောက် ဖြစ်နိုင် လောက်တဲ့ ပမာဏ ဖြစ်ပါတယ်..
မကြာခင်မှာ ကလေးငယ်ဟာ လူးလိမ့်အော့အံ ပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ် လဲကျနေပါတယ်.. အိမ်ရှင်မ ဖြစ်သူဟာ ထမင်းချက်ရင်း သတိရလို့ အခန်းထဲကို ကဗျာကယာ ပြေးသွားကြည့်တဲ့ အခါ ကလေးနဲ့ ဆေးပုလင်းကို မြင်တွေ့လိုက်ရတာနဲ့ အခြေအနေကို သဘောပေါက် သွားပြီး ကလေးကို ဆေးရုံသို့ ချက်ခြင်း ခေါ်ဆောင်သွားသော်လည်း ဆေးရုံအရောက်မှ ကလေးငယ်ဟာ သေဆုံးသွားပါပြီ… မိခင်ဖြစ်သူမှာ အရူးတစ်ပိုင်း ခံစား နေရပြီး၊ သူမရဲ့ မေ့လျှော့မှု အတွက်လည်း ယူကြုံးမရ ဖြစ်နေရပါတယ်.. သူ့ယောက်ျားကို မျက်နှာချင်း ဆိုင်ဖို့ အတွက်လည်း ထိတ်လန့် တုန်လှုပ် နေမိပါတယ်.. ယောက်ျားဖြစ်သူဟာ အိမ်မှ မထွက်မီ ဆေးပုလင်းအကြောင်း သတိပေး သွားပါရက်နဲ့ မေ့လျှော့ သွားမိတဲ့ သူမကို ယောက်ျားဖြစ်သူက ဘယ်လို အပြစ်တင်စကားတွေ ပြောမယ်ဆိုတာ တွေးကြည့် လို့တောင် မရနိုင်အောင် ဖြစ်နေမိပါတယ်…
မကြာခင်မှာ လင်ယောက်ျား ဖြစ်သူဟာ စိုးရိမ်သောက ရောက်နေတဲ့ မျက်နှာနဲ့ ဆေးရုံကို မောကြီးပန်းကြီး ရောက်လို့လာပါတယ်… ကလေးရဲ့ အလောင်းကိုလဲ တွေ့ရော မိခင်ဖြစ်သူကို လှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်.. ပြီးတော့ စကားတစ်ခွန်းကို လှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်…
စာဖတ်သူများ စဉ်းစားကြည့်ပါနော်… ယောက်ျားလုပ်သူက မိန်းမကို လှမ်းပြောလိုက်တဲ့ စကားက ဘာများ ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါသလဲရှင်?
ယောက်ျားက မိန်းမ ဖြစ်သူကို လှမ်းပြောလိုက်တဲ့ စကားက မင်းကို ငါ ချစ်ပါတယ် မိန်းမရယ်. တဲ့
ယောင်္ကျားဖြစ်သူဟာ အသက် ပြန်မရှင်နိုင်တော့မဲ့ ကလေးအတွက် မိခင်ဖြစ်သူကို အပြစ်တင်နေလဲ အလကားဘဲ ဆိုတာ သဘောပေါက် နားလည်နိုင်သူ ဖြစ်ပါတယ်.. ဖြစ်သွားတဲ့ ကိစ္စမှာ မိခင်ဖြစ်သူမှာသာ အပြစ်ရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး.. သူကိုယ်တိုင်လည်း အိမ်ကမထွက်မီ အချိန် အနည်းငယ်လေး ပေးလိုက်ပြီး ဆေးပုလင်းကို ကောက်သိမ်းလိုက်ပါက ယခုလို ကိစ္စမျိုး ဖြစ်လာ စရာ မရှိနိုင်ပါ… ယခုအချိန်မှ မိခင်ဖြစ်သူကို အပြစ်တင် လွှဲချနေလို့လဲ အကျိုးမရှိနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကို သဘောပေါက်ပါတယ်.... ပြီးတော့ မိခင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း သူမအချစ်ဆုံးသော သားလေးတစ်ယောက်ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်.. ယခုအချိန်မှာ သူမအတွက် လိုအပ်နေတာက လင်ယောက်ျားရဲ့ ပြစ်တင်ကြိမ်းမောင်းမှု၊ အော်ဟစ်ဆဲဆိုမှု မဟုတ်ဘဲ နှစ်သိမ့်ဖေးမမှု၊ စာနာ ထောက်ထားမှုကို လိုအပ်နေချိန် ဖြစ်ပါတယ်.. လင်ယောက်ျားဖြစ်သူဟာ မိန်းမဖြစ်သူကို သူမ လိုအပ်နေတဲ့ အရာလေးတွေကို ပေးလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်..
တစ်ခါတစ်လေမှာ ကျွန်မတို့တွေဟာ လုပ်ငန်းခွင်မှာ၊ လူမှု ဆက်ဆံရေး နယ်ပယ်မှာ၊ ကိုယ့်မိသားစု အသိုင်း အ၀ိုင်း ထဲမှာ ပြဿနာ တစ်ခုခုနဲ့ ကြုံတဲ့ အခါ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး အပြစ်တင်ရင်း၊ စောဒက တက်ရင်း အချိန် ကုန်ဆုံးနေတတ်ကြပါတယ်.. နွေးထွေးစွာ၊ စာနာ နားလည်စိတ်နဲ့ ဖေးမကူညီသင့်တဲ့ အချက်လေးကို မေ့လျှော့လို့ နေတတ်ကြပါတယ်.. ဖြစ်လာတဲ့ ပြဿနာကို တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး အပြစ်တင် လွှဲချနေမဲ့ အစား ဆွေးနွေး အဖြေရှာပြီး၊ ၀ိုင်းဝန်းဖြေရှင်း သင့်ပါတယ်.. နာကျင်ဆုံးရှုံးနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို မိမိရဲ့ စကားနဲ့ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံ မနာကျင်စေသင့်ပါဘူး.. ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ ကိစ္စ တစ်ခုဟာလည်း အပြစ်တင်နေယုံနဲ့ ပြန်ကောင်းမလာနိုင် တော့ပါဘူး
စာမေးပွဲကျလို့၊ တစ်ခုခု မအောင်မြင်လို့၊ အမှားတစ်ခုခုကို လုပ်မိလို့ ဆုံးရှုံး ထိခိုက်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို စာမကျက်လို့၊ မကြိုးစားလို့၊ အသုံးမကျလို့ စသဖြင့် အပြစ်တင်နေမဲ့အစား ဒီတစ်ကြိမ် မအောင်မြင်ရင် နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ကြိုးစားလို့ ရပါသေးတယ်.. အားမငယ်ပါနဲ့၊ စိတ်မပျက်ပါနဲ့ စသဖြင့် စကားလေးများနဲ့ နွေးထွေးတဲ့ နှစ်သိမ့်မှုလေး ပေးကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ကျရှုံးတဲ့သူဟာ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ကြိုးစားချင်စိတ်တွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်... သူ့ရဲ့ ဆုံးရှုံးမှု အတွက်လည်း တစ်စုံ တစ်ယောက်ရဲ့ အားပေးနှစ်သိမ့်မှုကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျ အားငယ်ခြင်းကနေ ပြန်လည် သက်သာရာ ရနိုင်ပါတယ်... စိတ်ထိခိုက် အားငယ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ရလိုက်တဲ့ အားပေး နှစ်သိမ့်မှုလေးဟာ ပေးရတဲ့ သူအတွက် ဘာမှ အပန်းမကြီးပေမဲ့ ရလိုက်တဲ့ သူအတွက်တော့ တန်ဖိုးကြီးလှပါတယ်.. အစွမ်းထက်လှပါတယ်.. ဒါကြောင့်လဲ ကျွန်မတို့ဟာ ထိခိုက် ဆုံးရှုံးသူများကို အပြစ်တင် ဝေဖန်ခြင်း လုပ်မဲ့အစား နွေးထွေးစွာ နှစ်သိမ့်တတ်သူများ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားသင့်ကြ ပါတယ်နော်....
A Couple's Heartbreak ( Unknown Author) ကို ဘာသာပြန်ပါသည်...
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Wednesday, January 27, 2010 Labels: ရသစာစုများ
photo from http://www.georgewashingtonwired.org/wp-content/uploads/2008/12/washington-on-horse-final.jpeg
တစ်ခါက မြင်းစီးထားတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ စစ်သားတွေ မနိုင် မနင်းနဲ့ ၀ိုင်းပြီး မနေတဲ့ လေးလံသော ၀န်တင် ပစ္စည်းနားကို ရောက်လာ ပါတယ်.. လူအင်အားနဲ့ ပစ္စည်းရဲ့ အလေးချိန် မမျှတဲ့အတွက် သူတို့ မ နေတဲ့ ပစ္စည်းဟာ နေရာကနေ နည်းနည်းလေးတောင် မရွေ့ပါဘူးတဲ့… အဲဒီနားမှာတော့ တပ်ကြပ်လေး တစ်ယောက်ဟာ ၀ိုင်းဝန်း မတင်နေကြတဲ့ စစ်သားလေးတွေကို မကူညီဘဲ ဘေးကနေသာ ရပ်ကြည့် နေခဲ့ပါတယ်.. ဒါကို သတိထားလိုက်မိတဲ့ မြင်းစီး လူကြီးက တပ်ကြပ်လေးကို မေးလိုက်ပါတယ်..
“ဒီလူတွေ ဒီလောက် မနိုင်မနင်း ဖြစ်နေတာ ဘာကြောင့် ၀ိုင်းပြီး မကူညီတာလဲ ” တဲ့… တပ်ကြပ်လေးက ပြန်ဖြေ ပါတယ်.. “ ကျွန်တော်က တပ်ကြပ်လေ.. ဒီအဖွဲ့မှာ ခေါင်းဆောင်ဗျ.. ကျွန်တော်က သူတို့ကို အမိန့်ပေးရတာ...အမိန့်ပေးတဲ့လူ ဆိုတာ ၀ိုင်းလုပ်ဖို့ မလိုဘူး ” တဲ့.. ဒီတော့ မြင်းစီး တဲ့လူက ဘာမှမပြောတော့ဘဲ မြင်းပေါ်က ဆင်းလိုက် ပါတယ်.. ပြီးတော့ ပစ္စည်းကို ၀ိုင်းပြီး မနေတဲ့ စစ်သားတွေ အနားကို သွားပြီး ၀ိုင်းကူ လိုက်ပါတယ်.. သူရဲ့ ကူညီမှုကြောင့် ပစ္စည်း ဟာ နေရာကနေ ရွေ့သွား ပါတယ်… ဒီနောက် မြင်းသမားက မြင်းပေါ်ကို ပြန်တက်လိုက်ပြီး တပ်ကြပ်လေး ရှိရာဘက်ကို လှည့်လိုက်တယ်... “ နောက်တစ်ခေါက် မင်းရဲ့ လူတွေ အကူအညီ လိုရင် စစ်ဦးစီးချုပ်ကို အခေါ်လွှတ်လိုက်… ” လို့ ပြော ပြီး မြင်းကိုစီးကာ ထွက်ခွာသွားပါတယ်..
သူထွက်သွားပြီးမှ သိလိုက်ရတာက မြင်းစီးထားတဲ့ လူကြီးဟာ စစ်ဦးစီးချုပ် ဂျော့ခ်ျ ၀ါရှင်တန် ဖြစ်တယ် ဆိုတာပါဘဲ…
ဒီဇာတ်လမ်းလေးက တိုတိုလေးပါဘဲ.. ဒါပေမဲ့ ဆင်ခြင်တတ်ရင် သင်ခန်းစာ ယူစရာပါ.. တပ်ကြပ်လေးရဲ့ အဖြစ်က ဘာနဲ့တူသလဲဆိုရင် မပြည့်တဲ့အိုးနဲ့ တူပါတယ်.. ကျွန်မတို့ရဲ့ မြန်မာ စကားပုံလေး ရှိပါတယ်.. မပြည့်တဲ့ အိုး ဘောင်ဘင် ခတ်တယ် ဆိုတာပါဘဲ.. အိုးတစ်လုံးမှာ ရေကို ပြည့်အောင် မထည့်ထားတဲ့ အတွက် ရေအိုးကို လှုပ်ခါတိုင်း ရေဟာ ဘောင်ဘင်ခတ်ပြီး အသံပိုကျယ်ပါတယ်.. ဒီလိုလူမျိုးတွေ လောကကြီးမှာ များများစားစား ရှိနေပါတယ်.. ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘ၀င်မြင့် နေတတ်သော၊ ကိုယ်တိုင်လဲ ၀င်မလုပ်၊ သူများ လုပ်တာကို ထိုင်ကြည့်ပြီး အပြစ်ပြောနေတတ်တဲ့ လူတွေဟာ မပြည့်ဝတဲ့အိုးလို လူမျိုးတွေပါ…
ပြည့်ဝတဲ့အိုးများကျတော့ လှုပ်ခတ်မှုလည်း နည်းပြီး အသံကျယ်ကျယ်လဲ မမြည်ပါဘူး… လုပ်စရာ ရှိတာကို စကားများများ မပြောဘဲ တိတ်တိတ် ဆိတ်ဆိတ် ၀င်လုပ်ပြီး စာနာစိတ်၊ ထောက်ထားစိတ် များနဲ့ ကူညီတတ်သူ၊ လက်အောက်ငယ်သားနဲ့ လူအများအပေါ် ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ထားတတ်သူ၊ နားလည် ကြင်နာတတ်သူများဟာ ပြည့်ဝအိုးလို လူစားမျိုး ဖြစ်ကြပါတယ်.. ဒီလိုလူစားမျိုးဟာ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်အခြေ အနေဘဲ ရောက်ရောက် ကိုယ့် အောက်က လူတွေနဲ့ သဟဇာတ ဖြစ်တတ်ပြီးတော့ လူချစ်လူခင်များပါတယ်.. လူတွေကလဲ လေးစား ကြည်ညို ကြပါတယ်..
မောက်မာပြီး ဘ၀င်မြင့်တဲ့ လူ၊ လက်အောက် ငယ်သားများကို ကိုယ်ချင်းမစာ တတ်သူများဟာ မပြည့်ဝအိုးနဲ့ သဏ္ဍာန်တူပြီး ရာထူး အရှိန်အ၀ါ ကြောင့်သာ လူတွေက သူ့ကို ကြောက်ရွံ့ နေရသော်လည်း၊ လူတိုင်းကလဲ မကြည်ဖြူ၊ စေတနာမရှိ ဖြစ်တတ် ပါတယ်... ကျွန်မတို့ဟာလည်း ပြည့်ဝအိုးလို လူစားလား.. မပြည့်ဝတဲ့ အိုးလို လူစားလား ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပြီး မပြည့်ဝသေးရင် လိုအပ်တာ လေးတွေကို ဖြည့်ဆည်းပြီး လောက ကောင်းကျိုးကို တစ်ထောင့်တစ်နေရာက ကူညီနိုင်ဖို့ ကြိုးစား ကြည့်ကြပါစို့လားရှင်…..
* In The Book of Virtues, edited by William J. Bennett, Simon & Schuster, New York, 1993, p. 204 မှ Practice Humility ကို ဘာသာပြန်ပါသည်..
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Tuesday, January 26, 2010 Tuesday, January 26, 2010 Labels: ရသစာစုများ
တစ်ခါက လူကြီးတစ်ယောက်ဟာ ပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ရှာဖွေဖို့အတွက် သူ့ရဲ့သားကို ပညာရှိတစ်ဦးထံ စေလွှတ် လိုက်ပါတယ်.. လူငယ်လေးဟာလည်း စူးစမ်းလိုစိတ်ရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့ ပညာရှိကြီး ရှိတဲ့အရပ်ကို ခရီးထွက်ပါတယ်.. ပညာရှိထံ ရောက်ဖို့ လမ်းခရီးမှာ ကန္တာရကြီး တစ်ခုကို ရက်ပေါင်း ၄၀ကြာအောင် ကျော်ဖြတ်ရပါတယ်.. နောက်ဆုံးတော့ တောင်ထိပ်ကြီး တစ်ခုမှာ လှပ ခန့်ညားစွာ တည်ရှိနေတဲ့ ရဲတိုက်ကြီး တစ်ခုဆီကို ရောက်လို့ သွားပါတော့တယ်.. အဲဒီ ရဲတိုက်ကြီးဟာ ပညာရှိကြီး နေထိုင်ရာ နေရာဖြစ်ပါတယ်.
ပညာရှိကြီးကို ရှာဖွေရင်း လူငယ်လေးဟာ ခန်းမကျယ်ကြီး တစ်ခုထဲကို ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်.. အဲဒီအခန်းထဲမှာ လူတွေဟာ ပျားပန်းခတ်မျှ လှုပ်ရှား သွားလာနေကြပြီး လူတစ်ချို့ဟာ ခန်းမကြီးရဲ့ ထောင့်မှာ စကားဝိုင်းဖွဲ့ပြောနေကြသလို ၊တီးဝိုင်းငယ် တစ်ခုကလည်း သာယာ ငြိမ့်ညောင်းတဲ့ တေးသွားလေးများကို တီးခတ်ဖျော်ဖြေ နေပါတယ်.. စားသောက်စရာတွေ တည်ခင်းထားတဲ့ စားပွဲကြီးမှာတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံး၊အရသာအရှိဆုံးလို့ ထင်ရလောက်တဲ့ စားသောက်ဖွယ်ရာ မျိုးစုံကို ပန်းကန်ပြားများပေါ်မှာ လှပစွာ တည်ခင်းထားပါတယ်.. ပညာရှိကြီးဟာလည်း လူတစ်ဦးချင်းဆီသို့ လိုက်လံနှုတ်ဆက် နေပါတယ်.. လူငယ်လေးဟာ ပညာရှိကြီး သူ့ဆီ ရောက်လာဖို့ကို ၂နာရီလောက် ကြာအောင် စောင့်လိုက်ရပါတယ်..
ပညာရှိကြီးက လူငယ်လေး ရှင်းပြနေတဲ့ ဒီရဲတိုက်ကြီးကို လာရောက်ရခြင်း အကြောင်းရင်းကို သေချာ အာရုံစိုက်ပြီး နားထောင် နေပါတယ်… ပြီးတော့ လူငယ်လေးကိုလည်း အခု လောလောဆည်တော့ ပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ရှင်းပြဖို့ အချိန် မရှိသေး ကြောင်းနဲ့ ဒီရဲတိုက်ကြီးကို လှည့်လှည်ကြည့်ရှုပြီး ၂နာရီအကြာမှာ ပြန်လာဖို့ ပြောပါတယ်… “အဲဒီလို လျှောက်ကြည့်နေစဉ် အတွင်းမှာ မင်းကို လုပ်စေချင်တာ တစ်ခုရှိတယ်..” လို့ပြောပြီး ပညာရှိက လ္ဘက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းထဲကို ဆီ အနည်းငယ် ထည့်ပြီး လူငယ်လေးကို ပေးလိုက်ပါတယ်… ပြီးတော့
“မင်း ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို လျှောက်ကြည့်နေတုန်း ဒီဇွန်းလေးကိုပါ ယူသွားပါ.. ဇွန်းထဲက ဆီကို လုံးဝ မဖိတ်စင် အောင်လဲ ဂရုစိုက်ပါ..” လို့ ပြောပါတယ်..
ကောင်လေးဟာ ရဲတိုက်ကြီးအတွင်း အပြင်ကို ဆင်းလိုက် တက်လိုက် နဲ့ လှေကားထစ်ပေါင်း များစွာကို ကျော်ဖြတ်ရင်း သူ့ရဲ့ အကြည့်ကိုလည်း ဆီထည့်ထားတဲ့ဇွန်းပေါ်မှာမှ တစ်ပါး အခြားဘယ်ကိုမှ အာရုံမစူးစိုက်မိ၊ မလေ့လာမိဘဲ လျှောက်သွား နေခဲ့ပါတယ်.. ပညာရှိပြောတဲ့ ၂နာရီ ပြည့်တဲ့ အချိန်မှာ သူ ရှိနေတဲ့ အခန်းထဲကို ပြန်လာခဲ့ပါတယ်..
“ကဲ ကောင်းပြီ.. မင်း အခုလိုလျှောက်ပြီး လှည့်လည် ကြည့်ရှုခဲ့ပြီဆိုတော့ ဘာတွေများ မြင်တွေ့ခဲ့လဲ.. ငါ့ထမင်းစားခန်းထဲမှာ ပြင်ဆင် ထားတဲ့ ပြင်သစ်လက်ရာ ပန်းထိုးပန်းချီရဲ့ ကြီးကျယ် ခမ်းနားမှုတွေကို တွေ့ခဲ့လား၊ ပန်းဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာ ငါ့ရဲ့ အကောင်းဆုံး ဥယျာဉ်မှူးကြီး ၁၀နှစ် ကြာအောင် လက်စွမ်းပြထားတဲ့ အလှအပကို တွေ့ခဲ့ရဲ့လား၊ ငါ့ရဲ့ စာကြည့်ခန်းထဲက ရှေးဟောင်း ပုရပိုဒ်စာတွေ တွေ့ခဲ့ရဲ့လား” လို့မေးပါတယ်..
လူငယ်လေးဟာ ရှက်ကိုးရှက်ကန်း ဖြစ်သွားပြီး သူဘာကိုမှ မကြည့်ခဲ့မိကြောင်းကို ၀န်ခံလိုက်ပါတယ်.. သူ့အာရုံ တစ်ခုလုံးနဲ့ အကြည့်ကို ပညာရှိကြီးက မဖိတ်စင်စေနဲ့လို့ မှာလိုက်တဲ့ ဆီဇွန်းပေါ်မှာသာ စူးစူးစိုက်စိုက် ထားရှိခဲ့မိပါတယ်..
“ ဒါဆို ပြန်သွားပြီးတော့ ငါ့ရဲတိုက်ကြီးရဲ့ ခမ်းနားလှပမှုကို သေချာ ပြန်သွားကြည့်ခဲ့. မင်းမသိတဲ့ နေရာတစ်ခုက၊ လူတစ်ယောက်ကို မင်း ယုံကြည်ဖို့ ခက်လိမ့်မယ်.. ဒီတော့ သေချာ သိအောင် လေ့လာခဲ့ပါ ” လို့ပြောလိုက်ပါတယ်..
ဒါနဲ့ဘဲ ကောင်လေးဟာ ဆီဇွန်းလေးကို ကိုင်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်ဖို့ ပညာရှိထံက ပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်.. ဒီတစ်ခေါက် မှာတော့ လူငယ်လေးဟာ နံရံနဲ့ မျက်နှာကြက်ပေါ်က အနုပညာ လက်ရာ၊ ကျယ်ဝန်း ခမ်းနားလှတဲ့ ဥယျာဉ်ကြီးရဲ့ မွေးမြ သင်းထုံနေတဲ့ပန်းပေါင်းစုံရဲ့ ရနံ့၊ ရဲတိုက်ကြီး တည်ရှိနေတဲ့ တောင်တန်းကြီးရဲ့ အလှအပ၊ ဖူးပွင့်ဝေစီနေတဲ့ ပန်းပွင့်ကလေးများရဲ့လှပမှု စသဖြင့် အရာရာအားလုံးကို သေချာ လေ့လာခံစားရင်း ပညာရှိထံ ပြန်လာခဲ့ပါတယ်… ပညာရှိနဲ့ တွေ့တော့ သူတွေ့ခဲ့သမျှ၊ မြင်ခဲ့ရသမျှ အရာ အားလုံးကို ပညာရှိကြီးအား ပြန်ပြောပြ ပါတယ်..
“ကဲ .. ကြည့်ခဲ့တာတွေတော့ ဟုတ်ပါပြီ.. ဒါပေမဲ့ ဘယ်မှာလဲ မင်းကို ငါထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ဆီတွေ ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ..”
ဒီတော့မှ လူငယ်လေးဟာ သူ့လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားတဲ့ ဇွန်းထဲက ဆီတွေကို သတိရမိပါတော့တယ်.. ဇွန်းထဲမှာ ဆီတွေဟာ တစ်စက် မှကို မကျန်ရစ် တော့ပါဘူး…
“အဲဒါဟာ ငါ မင်းကို ပေးနိုင်တဲ့ အကြံပါဘဲ… ပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ဆိုတာ ကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့ အံ့မခန်း လှပ ဆန်းကျယ်မှုတွေကို လေ့လာကြည့်ရှုရင်း လက်ထဲက ဆီဇွန်းကိုလဲ ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါနဲ့” ဆိုတာပါဘဲ…………….
ပညာရှိကြီး ပြောသွားတဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ဟာ အခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူး... လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ကို ရောက်အောင် သွားနေတဲ့အချိန်မှာ မိမိရဲ့ အလုပ်၊ မိမိစီးပွားရေး၊ မိမိ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိုသာ ဦးစားပေးပြီး ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုမစိုက်မိ၊ စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်မှုအတွက် အချိန်မပေးနိုင် ဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်.. မိမိဘ၀ရဲ့ တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်း အတွက် ကြိုးစား နေရင်းနဲ့ဘဲ စိတ်အပန်း ဖြေစရာ အချိန်လေးများ၊ ပျော်စရာ အကြောင်းအရာ လေးများကိုလည်း မိမိ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှာဖွေ ကြည့်တတ်ဖို့ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်..
အချို့လူများ ကျတော့ ဘ၀ရဲ့ တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်းကို ဘာတစ်ခုမှ မလုပ်ဆောင်ဘဲ အပျော်အပါး ကိစ္စတွေမှာဘဲ အချိန်ကုန်ဆုံးလို့ နေတတ်ကြပါတယ်... ထိုကဲ့သို့ အပျော်အပါးမှာ နှစ်မြုပ် နေသူများသည် လက်ထဲက ဆီဇွန်းကို ဂရုမထား လိုက်မိတဲ့ အဖြစ်မျိုးလိုပါဘဲ.. ဘ၀တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်းကို မရှာဖွေမိခဲ့တဲ့ အတွက် နောက်ဆုံးမှာ ကိုယ့်လက်ထဲမှာ ဘာဆို ဘာမှ မကျန်တော့မဲ့ အဖြစ်မျိုးနဲ့ ကြုံတွေ့ ရတတ်ကြောင်းကို သတိပေးလိုက်ခြင်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်..
ဒီတော့ ကျွန်မတို့ဟာ ပညာရှိကြီး အကြံပေးသလို ပညာသင်ကြား နေရင်းဘဲဖြစ်စေ၊ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ၀င်ရောက် နေသည်ဘဲဖြစ်စေ၊ စီးပွားရေး နယ်ပယ်ထဲမှာဘဲ ဖြစ်စေ၊ ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ ဘ၀တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်းကို မျှမျှတတ ဖြစ်အောင် ရှာဖွေကြည့်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားသင့်ပါတယ်.. အပျော်အပါးကို တရားလွန် ၀ါသနာ ကြီးသူများကလည်း အသိ တစ်ခါးချပ်လေး လှပ်ပြီးတော့ အနာဂတ်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ မိမိလက်ထဲက ဆီဇွန်းလေးကို သတိထားမိ နိုင်ပါစေလို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်ရှင်..
Paulo Coelho ရဲ့ secret of happiness ကို ဘာသာပြန် ဝေငှပါသည်ရှင်..........